Ekliziastis 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Solomọn chebaara mbọ ọ gbara echiche (1-11)
Amamihe mmadụ abachaghị uru (12-16)
Otú ịrụsi ọrụ ike si bụrụ ihe efu (17-23)
Rie ihe, ṅụọ mmanya, kporiekwa ndụ n’ihi ọrụ gị (24-26)
2 M kwuziri n’obi m, sị: “Ka m kporiwe ndụ,* ka m hụgodị ihe ọma ga-esi na ya pụta.” Ma lee, ọ bụkwa ihe efu. 2 M kwuru banyere ịchị ọchị, sị, “Ọ bụ ara ọgbụgba!” M kwukwara banyere ikpori ndụ,* sị, “Kedụ uru ọ bara?” 3 M ṅụwara nnukwu mmanya ka m mara ma ọ̀ bara uru.+ N’oge ahụ niile, uche ka kpakọrọ m ọnụ. M zuzudịrị nzuzu ka m wee chọpụta ihe kacha mma mmadụ kwesịrị ime n’ụbọchị ole na ole ọ ga-adị ndụ n’ụwa.* 4 M rụrụ nnukwu ọrụ dị iche iche.+ M rụụrụ onwe m ọtụtụ ụlọ.+ M kọọrọ onwe m ọtụtụ ubi vaịn.+ 5 M kọọrọ onwe m ọtụtụ ubi, rụọkwa ọmarịcha ogige dị iche iche. M kụkwara ụdị osisi niile na-amị mkpụrụ n’ime ha. 6 M rụụrụ onwe m ọdọ mmiri dị iche iche, ka mmiri wee si na ha na-ede ala* osisi dị iche iche juru mmiri. 7 M kpọtara ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ka ha na-ejere m ozi.+ M nwekwara ndị na-eje ozi a mụrụ n’ụlọ m. M zụtakwara ọtụtụ anụ ụlọ, ya bụ, ehi na ìgwè ewu na atụrụ,+ karịa onye ọ bụla bu m ụzọ bie na Jeruselem. 8 M kpakọtaara onwe m ọlaọcha na ọlaedo,+ akụ̀ ndị eze na akụ̀ si n’ógbè dị iche iche.+ M kpọtara ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị ga na-abụrụ m abụ. M kpọkọọrọ onwe m ihe na-eme ụmụ nwoke ezigbo obi ụtọ, ya bụ, nwaanyị, ọtụtụ ụmụ nwaanyị. 9 Aghọrọ m onye ukwu, baakwa ọgaranya karịa onye ọ bụla bu m ụzọ bie na Jeruselem.+ M ka nwekwara amamihe m. 10 E nweghị ihe ọ bụla gụrụ m m na-enwetaghị.+ E nweghị ụdị ihe ọ bụla ga-eme m obi ụtọ m gbochiri onwe m inweta, n’ihi na m* ṅụrịrị ọṅụ maka ọrụ niile m na-arụsi ike. Ọ bụkwa ya bụ ụgwọ ọrụ m* maka ọrụ niile m na-arụsi ike.+ 11 Ma mgbe m chebaara ọrụ niile m rụrụ echiche, chebakwara ọrụ niile m gbalịsiri ike rụọ echiche,+ m hụrụ na ihe niile bụ ihe efu, na ha bụ ịchụ ifufe.+ E nweghị ihe ọ bụla bara ezigbo uru n’ụwa.*+ 12 M bidoziri ichebara amamihe na nzuzu na iberiibe echiche.+ (Gịnị ka onye ga-anọchi eze ga-emeli? Ọ bụ naanị ihe e meburu eme.) 13 M wee hụ na amamihe bara uru karịa iberiibe,+ otú ahụ ìhè si baa uru karịa ọchịchịrị. 14 Anya onye ọ bụla nke ma ihe na-ahụ ụzọ nke ọma.*+ Ma onye nzuzu na-ejegharị n’ọchịchịrị.+ Amatakwala m na ọ bụ otu ihe na-eme* ha niile.+ 15 M wee kwuo n’obi m, sị: “Ihe na-eme onye nzuzu ga-emekwa m.”+ Oleezi uru m ritere na m ma ihe nke ukwuu? M sịziri n’obi m: “Ihe a bụkwa ihe efu.” 16 N’ihi na a gaghị echeta onye ma ihe na onye nzuzu ruo mgbe ebighị ebi.+ N’oge na-adịghị anya, a ga-echefu mmadụ niile. Oleekwa otú onye ma ihe ga-esi anwụ? Ọ ga-anwụ otú onye nzuzu si anwụ.+ 17 M kpọziri ndụ asị+ maka na ihe niile a na-eme n’ụwa* na-agbawa m obi, n’ihi na ihe niile bụ ihe efu.+ Ha bụ ịchụ ifufe.+ 18 M kpọziri ihe niile m rụtara n’ọrụ m rụsiri ike n’ụwa* asị,+ n’ihi na m ga-ahapụrụ ya onye ga-anọchi m.+ 19 Ònye makwanụ ma ọ̀ ga-abụ onye ma ihe, ka ọ̀ ga-abụ onye nzuzu?+ Ma, ọ ga-eweghara ihe niile m gbasiri mbọ ike nweta, bụ́ ihe ndị m nwetara n’ụwa* maka na m ma ihe. Ihe a bụkwa ihe efu. 20 Obi wee malite ịda m mbà n’ihi ọrụ niile m rụsiri ike n’ụwa.* 21 N’ihi na mmadụ nwere ike iji amamihe na nkà o nwere nakwa ihe ọ mụtara rụsie ọrụ ike, ma ọ ga-enyefe ihe niile ọ rụtara n’aka onye na-arụghị ọrụ ọ bụla.+ Ihe a bụkwa ihe efu, ọ jọgbukwara onwe ya.* 22 Oleedị uru mmadụ na-erite n’ọrụ niile ọ na-arụsi ike nakwa n’ihe ọ na-achọsi ike, nke mere o ji na-arụsi ọrụ ike n’ụwa?*+ 23 N’ihi na ná ndụ ya niile, ọrụ ọ na-arụ na-akpasu ya iwe, na-agbawakwa ya obi.+ Obi anaghịdị ezu ya ike n’abalị.+ Ihe a bụkwa ihe efu. 24 E nweghị ihe dị mma karịa mmadụ iri ihe na ịṅụ mmanya na ikpori ndụ n’ihi ọrụ ọ na-arụsi ike.+ M chọpụtara na ihe a sikwa n’aka ezi Chineke,+ 25 n’ihi na a sị ka e kwuwe, ònye na-eri ihe ma na-aṅụ mmanya karịa m?+ 26 Chineke na-enye onye na-eme ihe dị ya mma amamihe, na-emekwa ka ọ na-amụta ihe ma na-enwe obi ụtọ.+ Ma, ọ na-enye onye mmehie ọrụ ịchịkọta ihe na ikpokọta ihe, naanị ka o wee bunye ha onye na-eme ihe dị ezi Chineke mma.+ Ihe a bụkwa ihe efu. Ọ bụ ịchụ ifufe.
^ Ma ọ bụ “ṅụrịwa ọṅụ.”
^ Ma ọ bụ “ịṅụrị ọṅụ.”
^ Na Hibru, “n’okpuru eluigwe.”
^ Ma ọ bụ “ọhịa.”
^ Na Hibru, “obi m.”
^ Ma ọ bụ “òkè m.”
^ Ma ọ bụ “meghere emeghe.” Na Hibru, “dị ya n’isi.”
^ Ma ọ bụ “na-adabara.”
^ Ma ọ bụ “bụrụkwa nnukwu ọdachi.”